Ny lalan'ny fahatsiarovan-tena no sitrako.
Ny faniriana dia tsy manambola, manosika tena, afaka; ny loharanon'ny hery, fa tsy ny heriny. Amin'ny alalan'ireo taona maro tsy voatanisa dia ny Sorona lehibe dia ny Will.
Vol. 2 Martsa, 1906. Tsia
WILL (pisces) no famantarana faharoa amin'ny Zodiac.
Avy amin'ny fisehoana tsy misy porofo maneho ny fandehan-draharaha: ny mouvance (taurus) dia miteraka vovobony homogen (gemini) hanehoana ny maha-duality azy amin'ny maha-ara-panahy azy; Ny zavatra ara-panahy dia mihatra amin'ny tsiranoka lehibe (homamiadana) izay manaloka izany ao amin'ny ranon'ny fiainana (leo); Ny ranomasimben'ny fiainana dia mibontsina sy matevina (virgo); ary ny endrika dia manjary lasa firaisana (libra). Miaraka amin'ny fampandrosoana ny firaisana ara-nofo ny fampidirana ny zavatra ara-panahy dia feno. Rehefa mivoatra ny firaisana dia lasa ny saina (homamiadana). Ny filahatry ny evolisiona dia: ny toe-tsain'ny firaisana (libra) dia maniry faniriana (skorpio) amin'ny endrika (virgo); Ny faniriana dia manjary mihevitra (sagittary) amin'ny fiainana (leo); Ny fiheverana dia mivoatra ho an'ny maha-olona (kapikirana) amin'ny alàlan'ny rivomahery (homamiadana); Ny singa tsirairay dia manjary lasa fanahy (aquarius) amin'ny alalan'ny vatana (gemini); Ny fanahy dia mamolavola amin'ny sitrapo (pisces) amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana (taurus). Ho lasa fahatsiarovan-tena (na tsia).
Will tsy misy maso. Ny sitrapo dia manerantany. Ny faniriana dia tsy mety. Izy no loharano sy fiandohan'ny fahefana rehetra. Ny fahafantarana, ny hendry, ny manan-tsaina rehetra, ny ankehitriny.
Hanome hery ny olona rehetra araka ny fahafahany mampiasa azy, fa tsy hery.
Ny fahafahana dia afaka amin'ny fifamatorana, fifamatorana, fetra, na fifandonana. Afaka ny afaka.
Ny faniriana dia tsy misy ifandraisany, tsy misy fetra, tsy misy fetra, mihetsiketsika, mangina, irery. Ny fanoloran-tena dia eo amin'ny fiaramanidina rehetra, ary manome hery ny singa rehetra arakaraky sy ampitahaina amin'ny maha-izy azy sy ny fahaizany mampiasa ny fahefana. Na dia hanome hery ny olona aza ny hanao asa mifanaraka amin'ny toetrany, ny toetra, ny faniriana, ny eritreritra, ny fahalalana ary ny fahendreny, kanefa dia mbola tsy hijanona sy tsy havoakan'ny toetra amam-panahy.
Tsy misy zavatra azo atao. Hanolotra ny tenany ho amin'ny asa rehetra. Ny sitrapo dia tsy voafetra, voafetra, mifatotra, na liana amin'ny, izay antony manosika, antony, fandidiana na vokatra. Ny sitrapo dia ny asan'ny maizina sy ny mistery.
Ny malalaka dia maimaim-poana toy ny hazavan'ny masoandro ary ilaina amin'ny hetsika rehetra toy ny hazavan'ny masoandro, fa tsy hifidy izay manome hery azy mihoatra noho ny masoandro ny fanapahan-kevitra ny amin'izay mety hitranga. Ny masoandro dia mamirapiratra amin'ny zavatra antsointsika hoe tsara sy ratsy, fa ny masoandro dia tsy mamirapiratra amin'ny fikasana ny ho tsara na ratsy. Ny masoandro dia hampisy ny faty mba hampielezana ny areti-mandringana sy ny fahafatesana ary koa hahatonga ny tany mamy mamokatra manome sakafo ho an'ny zanany. Ny fahasalaman'ny masoandro sy ny heniheny, ny tany efitra sy ny lohasaha lonaka, ny alina mamono mahafaty ary ny vokatra tsara dia mitovy amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny masoandro.
Ny sitrapo no loharanom-pahefana izay ahafahan'ny mpamono mamely ny famelezana mahafaty, ary koa ny loharanon-kery izay ahafahan'ny olona manao fihetsika feno hatsaram-panahy, sain-tsaina na ara-batana, na fahafoizan-tena. Ny fampindram-bola ny olona izay mampiasa azy io, dia ho afaka amin'ny fampiharana azy. Tsy voafetra amin'ny hetsika na ny antony manosika ilay hetsika izany, fa mamela ny tenany amin'ny andaniny, mba hahatonga ny mpilalao hiditra amin'ny fahalalana farany momba ny tsara sy ny ratsy.
Tena fahadisoana lehibe ny milaza fa afaka ny hihamatanjaka ny tenantsika raha milaza isika fa afaka manome hazavana ny masoandro isika. Ny loharanon-kery dia ny loharanon'ny herin'ny masoandro. Ny olona mampiasa ny sitrapony amin'ny fomba maimaim-poana amin'ny fampiasany ny hazavan'ny masoandro, fa ny olona kosa mahafantatra ny fampiasana azy dia hanana fahamendrehana na dia kely aza fa tsy mahafantatra ny fampiasana masoandro. Ny zavatra rehetra vitan'ny olombelona dia ny mahafantatra ny fomba hiomanana, ary avy eo hanomana fitaovana hampiasa ny masoandro na ny sitrapo. Ny hazavan'ny masoandro dia mizara ny herin'arivony izay ampiasain'ny olona amin'ny ampahany kely fotsiny, satria izy tsy mbola nahalala ny fomba fanomanana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fampiasana azy, ary satria tsy mahafantatra ny fampiasana azy amim-pahendrena. Ny loharanon-kery rehetra dia ny fahafahana, fa ny olona dia mampiasa izany amin'ny ankapobeny satria tsy manana fitaovana tsara izy, satria tsy mahafantatra ny fomba hampiasana ny sitrapo, ary ny fomba hanomanana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fampiasana azy.
Ao amin'ny fiaramanidina misy azy sy ny fiaramanidina, dia tsy misy loko sy tsy fananana; eo amin'ny fiaramanidin'ny vatana sy ny fanahy manerantany (gemini-aquarius), dia hamela ny votoaty hanavaka ny toe-panahy, ary ny fanahy hiaro, hampiray ary hahafoy tena ho an'ny zava-drehetra; eo amin'ny fiaramanidina sy ny maha-olona (kanseran'ny kapiera), ny herin'ny fofonaina no hitondra ny zava-drehetra ho fampisehoana, ary manome hery ny maha-izy azy ho lasa mahalala ny tenany sy tsy mety maty; eo amin'ny fiaramanidin'ny fiainana sy ny eritreritra (leo-sagittary), dia mamela ny fiainana hanorina sy hamotehana ireo endrika, ary manome hery ny eritreriny hikaroka ny vokatra tadiavina araka ny zavatra nofidiany; eo amin'ny fiaramanidina sy faniriana (virgo-scorpio), dia manome endrika ny fitazonana ny vatana, ny loko ary ny endriny, ary manome hery ny hanao zavatra araka ny fitarainan'ny jamba; eo amin'ny fiaramanidin'ny firaisana (libra), dia hanome hery azy ireo hamolavolana endrika, hampifangaro, hanitsy, handanjana, handika ary hampietry ny fitsipiky ny olombelona sy izao rehetra izao.
Noho izany, ny olombelona dia ao amin'ny vatana ara-batana, ny fitaovana sy ny hery ilaina mba hahazoana zavatra, ary mba ho lasa hery, hery, na andriamanitra, amin'ny alalan'ny fampiasana ny asan'ny maika.
Ny maha-olombelona tsirairay dia tsy olona tokana, afa-tsy ny lehilahy fito. Ny tsirairay amin'ireto lehilahy ireto dia manana ny fotony ao anatin'ny iray amin'ireo mpanara-dia fito an'ny olombelona. Ny lehilahy ara-batana no ambany indrindra sady be indrindra amin'ireo fito. Ireo lehilahy fito dia: ny lehilahy matanjaka ara-batana; ilay lehilahy manana endrika; ilay lehilahy eo amin'ny fiainana; ilay lehilahy maniry; ny mason'ny sainy; ilay lehilahy fanahy; ilay lehilahy te-hanao. Ny singa ara-materialy amin'ny olona tia ny sitrapony dia ny fototry ny fotony ao amin'ny vatana. Ny fitsipika voajanahary dia toy ny maimaim-poana sy tsy misy ifandraisany amin'ny fampiasana izay ametrahana azy toy ny fitsipika manan-tsaina amin'ny sitrapony izay ahatongavan'ny heriny.
Ao amin'ny tsy fahampian-tsakafo tsirairay, ny rivotra dia mandrisika amin'ny alalan'ny rà, ny faniriana (scorpio) amin'ny asa. Rehefa mitombo io foibe io, miaraka amin'ny olon-tsotra dia heverin'ny faniriana, izay matetika mifehy ny eritreritra, ary ny (pisces), manaraka ny eritreritra dia manome hery ny faniriana hanao asa. Noho izany dia mahazo ny filazana hermetic isika hoe: "Ny ambina dia maniry faniriana," izay mifototra amin'ny hoe ny faniriana dia tsy misy loko sy tsy misy dikany, ary na dia tsy liana amin'ny vokatry ny asa aza dia ho loharanon'ny herin'ny fihetsika; ary mba hampirisihana ny asan'ny sitrapony dia tsy maintsy maniry ny olona eo amin'ny toerany ankehitriny. Raha, na izany aza, ny eritreritra dia tsy manaraka ny soso-kevitry ny faniriana, fa noho ny fiangaviana mitady faniriana ambony kokoa, ny herin'ny faniriana dia tokony hanaraka ilay hevitra, ary hatsangana amin'ny sitrapo. Ny fahatelo-ny faniriana aina (kansera-scorpio-pisces), dia avy amin'ny havokavoka, ny taovan'ny firaisana, amin'ny loha, amin'ny làlan'ny hazavana. Ny zodiaka dia ny drafitry ny fananganana sy ny fampandrosoana an'izao tontolo izao ary ny iray amin'ireo lehilahy fito.
Ny fitsipiky ny fotony dia ny lohahevitra ao amin'ny vatana izay ahafahan'ny drafitra manerana izao tontolo izao miasa, ary ny fahafaha-manao sy ny fahombiazan'ny lehilahy dia miankina amin'ny fampiasana izay ametrahana io fitsipika io. Ny tsy fahafatesana dia tratra ao amin'ny vatana. Raha mbola velona ao amin'ny vatany izy, talohan'ny nahafatesany, dia mety ho lasa tsy mety maty ny olona. Aorian'ny fahafatesan'ny vatana dia tsy misy olona lasa tsy mety maty, fa tsy maintsy miverina miverina ao amin'ny vatan'ny olombelona vaovao indray izy eto amin'ity tany ity.
Ankehitriny, mba ho lasa tsy mety maty, ny lehilahy iray dia tokony hisotro amin'ny "elixiran'ny fiainana", ny "rano tsy mety maty", "ny tendron'ireo andriamanitra", "ranom-pofona Amrita", ny "jono soma" miantso ireo literatiora isan-karazany. Tsy maintsy, araka ny filazan'ny mpahay siansa azy, ny "filozofa", izay mamadika azy ho volamena madio. Izany rehetra izany dia manondro zavatra iray: amin'ny saina-olona, ​​ary ny fitsipika mihinana izay mamelona azy. Ity no fitaovana mahagaga izay hamokarana ny vokatra rehetra. Ny fitsipi-pontsika dia ny fivoaran-tena, ny fifindran'ny fanahy, ny fanamafisana ny saina, ny fanirian-tsainy, ny fanorenana aina, ny fanoloran-tena ary ny hery mitaona amin'ny vatana.
Misy alchemy avy amin'ny fihodinana fahefatra amin'ny tsenan-tsakafo amin'ireo sakafo efatra entina amina vatana (jereo ny editorial "Food," The Teny, Vol. I, No. 6), ny saina-olombelona. Izy dia voatsabo ary natsangan'ny fitsipi-pitondran-tena, izay izany. Mba hanatontosana ny vokatr'izany fanorenana ny saina izany, izay mahagaga, ny zavatra hafa rehetra dia tokony hanolo-tena amin'ny fitsipi-poko; ny zavatra rehetra iainan'ny aina, mba hampitomboana ny faharesen-dahatra; Ary noho izany, tsy tokony hiantso ny fitsipi-pitondran-tena ny fampidirana ny heriny amin'ny fampihetsiketsehana na fananana. Avy eo ny sitrapo manerantany dia hanao ny fahatanterahana amin'ny sitrapo, ny vatan'ny saina izay lasa saina; deathless; alohan'ny fahafatesan'ny vatana. Ny fomba mahomby ho an'ny mpianatra dia ny mieritreritra amin'ny famoahana ireo ivon-toerana ambony ao amin'ny vatana, mandra-pahatongan'ny fisainana eo afovoany. Isaky ny manintona ny eritreritra amin'ny faniriana any amin'ny foibe ambany, dia tokony hatsangana avy hatrany ny eritreritra. Izany dia mampiorina ny saina-saina ary miantso mivantana ny sitrapo avy any ambony, fa tsy mamela ny sitrapo hanenina amin'ny faniriana avy ety ambany. Ao ambadiky ny faniriana no maniry ny faniriana, fa ny fanirian-tsika dia tsy maintsy misy. Ny mpanohana ny lalan'ny fahatsiarovan-tena dia mitondra lalàna vaovao; Ho azy dia miova ny baiko; ho azy: mihoatra ny fanirian'ny faniriana.
Ny fepetra ilaina amin'ny fivoarana marina dia fiekena mafy ny hoe ny olona tsirairay dia manana ny zo sy ny herin'ny safidy, hanao asa mifanaraka amin'ny fahendreny, ary ny hany tokana ho an'ny hetsika dia ny tsy fahalalana.
Amin'ny fahendreny kely ary toa tsy misy hevitra mazava momba ny zavatra fantany marina, ny olona dia miresaka momba ny safidy malalaka sy ny tanjona. Ny sasany milaza fa manana safidy malalaka ny olona, ​​fa ny hafa kosa milaza fa tsy misy ny sitrapo, izany dia fahaizana na hatsaran-tsaina. Maro no manizingizina fa ny saina sy ny zavatra rehetra dia ny fanatanterahana ny ho avy; fa ny zava-drehetra dia tahaka ny maha-izy azy satria efa voatendry ho azy ireo; fa ny zava-drehetra dia ho amin'ny ho avy ihany no hany voalazan'izy ireo, ary voatokana ho tony amin'ny sitrapo, fahefana, fiantohana, anjara, na Andriamanitra; Ary, raha tsy misy feo na safidy amin'io raharaha io, dia tsy maintsy manaiky ny olona.
Ny fahafahana dia tsy hahatratra na oviana na oviana izay tsy mahatsapa fa malalaka ny sitrapony. Izay mino fa ny olona rehetra dia voatery hanao zavatra avy amin'ny sitrapony efa voafaritra fa tsy ny an'ny tenany manokana, dia tarihin'ny governemanta sy ny fanaraha-maso avy amin'ny faniriana voajanahary amin'ny faniriana izay manafina sy mitazona azy amin'ny fanandevozana. Na dia mihevitra aza ny lehilahy fa tsy manana ny herin'ny safidy izy na "safidy malalaka", dia tsy misy ny fahafahana miala amin'ny fahazotoany mivantana eo ambany fifehezana sy ny fitondrana ny faniriana.
Raha marina izany, dia afaka izy; izay azon'ny olona atao; fa ny olon-drehetra dia manana ny zo sy ny herin'ny safidy; Ahoana no fomba hampiharantsika ireo fanambarana? Ny fanontaniana dia mianjera mazava tsara hoe iza no olona; inona no atao; ary inona no anjara. Olona manao ahoana ary inona no zava-misy, hitanay. Ankehitriny, inona no ho anjara?
Ny fihetsiketsehana izay mahatonga ny fanavahana voalohany amin'ny votoatin'ny homogène ao amin'ny mondialista tsy misy porofo maneho fihetseham-po amin'ny vanim-potoana evolisiona, dia mifototra amin'ny faniriana sy ny eritreritra sy ny fahalalana ary ny fahendrena sy ny sitrapon'ny vanim-potoana evolisiona, ary io fihetsika io dia tsy misy ary tsy azo ovaina amin'ny asany mandra-pahatongan'ny dingana mitovy na ny ambaratongam-pandrosoana tahaka ny tamin'ny vanim-potoanan'ny evolisiona teo aloha. Izany no anjaranao na anjaranao. Izy io dia ny taratasin-tsoratra momba ny kaontintsika sy ny fitantaran'ny vanim-potoana evolisiona. Izany dia mihatra amin'ny an'izao tontolo izao na ny fahaterahan'ny lehilahy iray.
Fotoana sy toerana nahaterahana; toe-javatra manodidina ny tontolo iainana; ny fambolena, ary ny fahafaha-manana sy ny fironana eo amin'ny vatana; dia ny hoavy, raketina na rakitsoratra momba ny toetra, izay lova amin'ny toetra sy ny zavatra niainany taloha. Mety ho tsara na ratsy ny totaliny. Manana bileta izy hanombohana ary tsy maintsy mipetraka amin'ny kaonty tranainy. Ny fironana sy ny fahaiza-manaon'ny vatana dia ny anjarany amin'ny fametrahan'izy ireo ny asan'ny saina, mandra-pivoaran'ny kaonty. Avy eo, tsy misy fandosirana, tsy misy safidy ve? Misy. Ny safidy dia mitoetra amin'ny fomba izay hanaiky sy hampiasa ny anjarany.
Ny olona dia afaka mandao tanteraka ny sainy ary manolo ny tenany amin'ny soso-kevitry ny lovany, na mety hanaiky azy ireo ho soso-kevitra amin'ny zavatra mendrika azy, ary mamaritra ny hanova azy ireo. Ny fandrosoana kely dia azo jerena amin'ny voalohany, saingy hanomboka hanamboatra ny hoaviny izy tahaka ny efa nataony tamin'ny fanatsarana ny ankehitriny.
Ny fotoana nofinidy dia fotoana fisainana rehetra. Ny totalin'ny foto-kevitry ny fiainana iray dia ny anjara na lova amin'ny fampodiana amin'ny hoavy.
Ny olona tsy manana na mampiasa dia tsy misy olona afaka malalaka, ary tsy misy olona afaka mifandray amin'ny asany na ny vokatry ny asany. Ny olona dia maimaim-poana amin'ny dingana izay ataony tsy misy ifandraisany amin'ny asany. Ny olona afaka dia olona iray izay miasa am-pahibemaso, nefa tsy misy ifandraisany amin'ny asany na ny vokatry ny asany.
Ny fanapahan-keviny dia hifidy sy hifidy raha te-ho tonga saina izy, saingy tsy misy na inona na inona toe-javatra na toe-javatra hafa mety hahaliana azy, na hisafidy, na hanapaka, inona no hataony, na dia io ihany no loharanon-kery izay manome hery ny rehetra ny antony manosika hanao zavatra ary mitondra ny vokatry ny asa.
Ao amin'ny lahatsoratry ny lahatsoratra Form (The Teny, Vol. I, No. 12) Nolazaina fa roa ihany no lalana: ny lalan'ny fahatsiarovan-tena sy ny lalan'ny endrika. Tokony ampidirina izao manaraka izao: ny faniriana no làlana; dia ny lalan'ny fahatsiarovan-tena.
Ny sitrapon'ny mpamorona sy ny mpamorona ny zava-drehetra. Izany no loharano mangina amin'ny hery rehetra misy ireo andriamanitra rehetra amin'ny vanim-potoana rehetra amin'ny firindran'ny fotoana tsy manam-petra. Amin'ny faran'ny fivoaran'ny evolisiona na vanim-potoana lehibe amin'ny fisehoan-javatra, dia ny mpandrindra amin'ny hetsika manerantany izay mamaha ny olana rehetra ao an-tsainy, manintona ny singa tsirairay amin'ny rakitsary momba ny zavatra ataony amin'ny fisehoan-javatra; ary miaro ireo fahatsapana ireo, na dia miaro ny mikraoba aza ny tany maina. Ho toy izany koa, any am-piandohan'ny fisehoan-javatra lehibe rehetra, izay mahatonga ny fihetseham-po voalohany amin'ny vatana sy ny mikraoba rehetra hiainga amin'ny fiainana sy ny asa.
Ny sitrapon'ny sorona lehibe amin'ny alalan'ireo mandrakizay tsy hita isa. Manana hery izy hamantarana ny tenany sy hahatonga azy ho fahatsiarovan-tena, kanefa mitoetra mandrakizay amin'ny maha-lohan-dabozia azy izay mety handalo ny dingana rehetra amin'ny traikefa sy ny fahalalana, ny fahendrena sy ny hery ary ny farany amin'ny fahafoizan-tena, mba ho tonga saina.